Uchwepheshe we-Semalt Uvela ku-Estrategias Esenciales Para Hashtag Marketing
Uma ngabe u-Instagram noma i-Twitter e-marketing yakho, kungenzeka ukuthi kungenzeka ukuthi ama-hashtag asho ukuthi ungumndeni wakho. Inkinga, isono embargo, aparece isitifiketi se-usarlos isratégicamente. Hhayi, bheka ama-hashtag angama-todas. I-Como vendor, akukho ama-puedes ignorarlos. Amaprosesa asezingeni eliphezulu, ama-amplink, ama-SEO, ama-aprican aphezulu kanye ne-intanethi - suguhaiguse.
Ngokuvamile, ama-hashtag aphindaphinda i-palabra o grupo de palabras que aparecen después del signo #. Uma ngabe ukhona umphathi we-imeyli, ungase usebenzise ama-e-mail. Ukuqhafaza amakholi, ukucubungula okungafani nokwenza okungafani nokukhiqiza kwakho.
El Gerente Senior de Ventas de Semalt ,Ryan Johnson, echa un vistazo a algunas de las estrategias de mercado clave para hashtags.
1. AmaHashtags de marca y campaña
Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Uma umthengisi, vumela ukudala i-hashtag de marca específico para su negocio. Ungasebenzisa i-akhawunti yakho bese ukhetha i-akhawunti yakho ye-imeyli. Ungagcini nje uma usuqedile, qhafaza ukuphawula.
Los hashtags de campaña, noma ngabe yikuphi, noma ngabe yikuphi ukukhangisa ukuze uthole ukumaketha. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela uzame futhi emva kwesikhathi ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe..Uma kungcono kakhulu, ungakwazi ukukhulisa ngokuzenzakalelayo. In the best, ukukhangisa esetshenziswa inqwaba yokuzijabulisa nje kuphela olwandle kuphela ukukhangisa.
2. Ama-Hashtags we-Tendencias
I-hashtag de tendencia ingase ikwazi ukucacisa okufana neyodwa okungahambisani nayo. Cambian continuamente en tiempo real. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana ne-alguna manera, sebenzisa iqhaza ngokusebenzisa i-etiqueta. Uma usebenzisa i-etiqueta yakho, sicela usebenzise i-akhawunti yakho.
I-Sin embargo, i-intanethi ye-intanethi isetshenzisiwe ngokulandela ama-hashtags of tendencia. Uma iziphakamiso zomphakathi zibonisa ukuthi akukho okulandelayo, qaphela ukuthi unesidingo. Ngama-casos, ukufakwa kwe-Twitter kungabonakali. Amakhompiyutha amancane ajwayelekile. I-Twitter kanye ne-Google + i-Google + yama-intanethi we-intanethi, okungaxhunyiwe ku-intanethi.
Ama-albhamu ama-albhamu asebenzisa ama-publicaciones. Ayikho isaziso se-marca. I-Tampoco indodana yilabo abathandayo. I-albhamu kuphela yama-hashtag ama-comunication asho okukhulunywe ngayo ngokuqukethwe kwe-publicas. Ngokwejwayelekile, u-SEO we-public public, uqondisa ama-akhawunti asesidlangalaleni ama-hashtag.
Uma ngabe ama-hashtag asekelwe ku-intanethi, bheka ukuthi kukhona ama-client. Ama-movie asebenzisanayo nawo angeke aqoke noma angene ku-intanethi. Uma kungenjalo, sicela usebenzise i-akhawunti yakho yendawo. Thumela ama-hashtag ama-segmentados geográficamente que aumenten la popularidad de su negocio en su comunidad.